ရင်ခုန်သံကိုယ်စီ – Grab Love Story
ည ဆယ်နာရီ ထိုးသွား သဖြင့် တိုင်ကပ်နာရီ မှ အချက်ပေးသံ ဆယ်ချက် ထွက်ပေါ်လာ လေသည် ။ ပွင့်ရိုက် ခရမ်းရောင်ဂါဝန်လက်ပျက် ကလေး ဖြင့် စာကြည့်စားပွဲ တွင် အမှတ်ဖြတ်နေသော အချိန်ပိုင်း ကျူရှင်ဆရာမလေး သဲစုမွန် လက်ထဲ မှ မှင်နီဘောပင်လေး ကို ချကာ လက်ဖြောက် ချိုးလိုက် ဇာတ်လေး ချိုးလိုက် ဖြင့် အကျောလေး လျော့လိုက်လေသည် ။
အသက် ၂၇ နှစ်သာ ရှိသေးသည့် သဲစုမွန်သည် ဦးလေးဖြစ်သူ ၏ ကိုးတန်း ဆယ်တန်း ဘာသာရပ်သင် သင်တန်းနှင့် ဘော်ဒါဆောင် တွင် မြန်မာစာအချိန်ပိုင်း ဆရာမ လုပ်သည် ။ ယခု နှစ်ဝက် စာမေးပွဲ အတွက် ဘော်ဒါမှ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ အား ဘော်ဒါဆောင် စာမေးပွဲစစ်ပြီး အမှတ်ဖြတ်နေရလေသည် ။ တစ်ညနေလုံး အမှတ်ထိုင်ဖြတ် လာရာ ယခု ညဆယ်နာရီ ပင် တိုက်ခဲ့လေပြီ ။
အလုပ်လည်း ပြီးပြီ အရမ်းလည်း ပင်ပန်းနေပြီ ဖြစ်သည် ။ သဲစုမွန် မှာ အရပ်အမောင်း ငါးပေ လေးလက်မခန့် ရှိပြီး အသားအရည် မှာ မဖြူမညိုလေး ဖြစ်သည် ။ ဆံနွယ်များမှာ ကျောအထိရောက်သော်လည်းအမြဲလိုလို ကလစ်လေးဖြင့် လိပ်တင်ကာ ညှပ်ထားတတ်သည် ။နဖူးပြင်ကျယ်ကျယ် . မျက်ခုံးနက်နက် . မျက်တောင်ကော့ကော့ . နှာတံစင်းစင်းလေး နှင့် ခပ်ရွှဲရွှဲနူတ်ခမ်း ပိုင်ရှင်လေး ဖြစ်သည် ။ မပိန် မဝ နှင့် အရပ်လည်း ရှိသူမို့ကြည့်ကောင်းသည် ။
အသားအရည် ထိမ်းသိမ်းသည့် သူဖြစ်ပြီး လိုးရှင်းအမြဲ လိမ်းတတ်သူ ဖြစ်သဖြင့် အသားအရည် နူးညံချောမွတ်စိုပြေသည် ။ ဘော်ဒါဆောင် မှ ကျောင်းသားများ ဆိုလျှင် သဲစုမွန် လမ်းလျောက်သည့် စတိုင်လေးကို ခိုးခိုးရှိုးကျသည် ။ တင်ကြီးကြီး မဟုတ်သော်လည်း သူ့ အိုး နှင့်သူတော့ လိုက်ပါသည် ။ သဲစုမွန် ပင်ပန်းလာသဖြင့် ပျင်းကြောများ ဆန့် နေစဉ် သူမအား အနောက်မှ သိုင်းဖက်ခြင်း ခံလိုက်ရသည် ။ ပြီးပြီလား . . မိန်းမ . ကိုယ်စောင့်နေတာ ကြာလှပြီ . .သဲစုမွန် သူမ အား သိုင်းဖက်လာသော လက်အစုံ ကို သူမလက်ကလေး ဖြင့် တွန်းဖယ်ရင်း .ကိုယ် ရာ . မိန်းမအရမ်း ပင်ပန်းနေပြီ . ပြီးတော့ ဒီနေ့ရန်မဖြစ်ချင်ဘူး ကိုဦး နှင့် သဲစုမွန် တို့လင်မယား သည် ကျန်ရှိသည့် အချိန်များတွင် အဆင်ပြေသော်လည်း အိပ်ခန်းပြသနာ မှာမူ အမြဲ တက်လေ့ရှိသည် ။
သဲစုမွန် သည် သာမန်မိန်းကလေးများ နှင့် မတူ ထူးခြားသူလေး ဖြစ်သည် ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တွင် စိတ်ကျေနပ်မှု မရှိသူ ဟုဆိုနိူင်သလို . နောက်တစ်ဖန် လိင်စိတ်အားနည်း သွားပြန်သူလည်း ဖြစ်ပြန်သည် ။ တစ်ခါတစ်ရံ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆံမှုများ ကို လုံးဝ စိတ်မပါတတ် . စိတ်ပါပြန်သော်လည်း ပြီးဆုံးတိုင်သည် မရှိ သူဖြစ်သည် ။ ကိုဦး လည်း ခေသူ မဟုတ် သဲစုမွန် အတွက် နာရီဝက်ကျော် တစ်နာရီကြာအောင် ထိန်းသိမ်းစွာ ဆက်ဆံပေးသည့် တိုင်အောင် သဲစုမွန် အတွက် မပြီးဆုံးနိူင်ပေ ။ သာမန်လိင်ဆက်ဆံ မှုအား စိတ်မပါ ဟူ၍လား သူမ အတွက် မတိုးတော့သည်လား ဟုသော ပဟေဠိကို နှစ်ဦးလုံး အဖြေမထုတ်နိူင်ခဲ့ကျ ။
ကြာလာသည် နှင့် အမျှ နှစ်ဖက်အဆင်မပြေမှု သည် တဖြေးဖြေးကြီးမားလှ ခဲ့သည် ။ ယခု အိမ်ထောင် သက်တမ်း ငါးနှစ်ကျော်လာသည့် အခါ ထိုပြသနာများ သည် ကြီးမားလာ လေသည် ။ အချေအတင် စကားများမှုများလည်း ရှိလာခဲ့သည် ။ သားသမီး ရဖို့ လည်း မဖြစ်နိူင် ဖြစ်လာတော့သည် ။ ကိုဦး စိတ်ရှည်လက်ရှည် နိူးဆွပေးသည့်တိုင် သူမ အတွက် ရင်ခုန်စရာ မဟုတ်သလိုပင် ။ ယခု သဲစုမွန် ၏ ငြင်းဆန်မှုကြောင့်လည်း ကိုဦး လက်လျော့မပေး . ။ သဲစုမွန် အား သိုင်းဖက်ရင်း ဆွဲထူကာ ရင်ခွင်ထဲ ထည့်ပြီး သဲစုမွန် မျက်နှာလေးကို ဆွဲမော့လိုက်လေသည် ။
ရှင်းလင်းနေသော မျက်နှာလေးအား ကိုဦး အနမ်းချွေကာ လက်များကို အငြိမ်မနေဘဲ သဲစုမွန် ရင်သားများကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း ကိုင်တွယ် ဆွပေးသည် ။ နာရီလက်တံ လည်ပတ်သွား သလို အချိန်သည်လည်း ရပ်တန့် မနေ ရွှေ့လျားခဲ့လေသည် ။ သီတင်းကျွတ် မိုးလွတ်ချိန် ဖြစ်သဖြင့် ကောင်းကင်ပြင် ကြည်လင်ပြတ်သားကာ ကြယ်ရောင်စုံ ထွက်ပေါ်နေလေသည် ။ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခွင်လုံးလည်း တိတ်ဆိတ်နေလေသည် ။ သို့ သော် ကိုဦး နှင့် သဲစုမွန် တို့လင်မယား ၏ အိမ်ခန်း အတွင်းမှာတော့ ကိုဦး သည် ရမ္မက်ရှိုက်သံများ နှင့် အတူ သဲစုမွန် စိတ်ကြွစေမည့် စကားများ မနားတမ်းပြောဆို နေလေသည် ။
ကုတင်ကြီး ပေါ်တွင် ကုတင်ခြေရင်းပိုင်း ကို မျက်နှာမူရင်း လက်နှစ်ဖက်ကို ကုတင်ခြေရင်းပိုင်း အစွန်းကို ဖိထားရင်း ဖင်မူးထောင် မနေအထား ကုန်းပေးထားသည့် သဲစုမွန် ခန္ဓာကိုယ်သည် အဝတ်အစား အရှင်းမရှိတော့ချေ ။ ကိုဦး သည်လည်း အဝတ်ဗလာဖြင့် ဖင်ကုန်းပေးထားသော သဲစုမွန် ၏ တင်သားများကြားမှ အမွှေးစုစု အဖုတ်ကြီး အား သူ၏ တုတ်ခိုင်လှသော လိင်တံချောင်းကို အရင်းတိုက်အောင် ထိုးသွင်းထားရင်း သဲစုမွန် ခါးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆုတ်ကိုင်ကာ ခါးကို ကော့ခါကော့ခါ ဖြင့် လိင်ခြင်း ဆက်ဆံနေလေသည် ။ ကိုဦး ဆောင့်သွင်း လိုက်တိုင်း သဲစုမွန် တင်သားများ နှင့် ကိုဦး ဆီးစပ်ခြင်း တစ်ဘတ်ဘတ် မြည်နေလေသည် ။
ကိုဦး နူတ်မှလည်း အငြိမ်မနေ . ”သဲပု . ကိုယ် လီးကြီးလား . ကြိုက်လား . ပြန်ဆောင့်ပေးပါအုန်း . ” နူတ်မှ မနားတမ်း မေးနေသော်လည်း သဲစုမွန် ထံမှ မည်သည့် အသံမှ ပြန်ထွက်ပေါ် မလာ . စိတ်ပျက်သည့် မျက်နှာဖြင့် ကိုဦး လုပ်သမျှသာ ငြိမ်သံပေးနေသည် ။ သာမန်ဆက်ဆံမှု အား သူမ စိတ်မည်သို့ မျှ မလှုပ်ရှားခဲ့ . ကလစ်ပြုတ်သွား သဖြင့် သဲစုမွန် ၏ ဆံနွယ်နက်နက်လေးများ သူမကျောပြင် ပေါ် ဖြန့် ခင်းနေသလို . သူမ မျက်နှာရှေ့လည်း ဝဲကျနေလေသည် ။ ” ဟူးးးးးး ” သဲစုမွန် ဆံပင်များကို လေဖြင့် မှုတ်တင်လိုက်ပြီး . အလိုးခံနေရသည် ကိုပင် မသိသလို မျက်နှာထားဖြင့် ကုတင်ခင်း ကို စိုက်ကြည့်နေလေသည် ။
ကိုဦး မှာတော့ ပုံမှန်စောင့်လိုး နေရင်းနာရီဝက်ကျော်ကျော် ရှိလာသည့် အခါ ပြီးချင် လာလေသည် ။ လိင်တံသည် လည်း သဲစုမွန် စောက်ဖုတ် အတွင်းမှ ဝင်သွားချည် . တစ်ဝက်ပြန်ထွက်ချည် နှင့် ပူလာလေသည် ။ ကိုဦးလည်း ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ပစ်ပြီး သူ၏ လိင်တံထိပ်မှ သုတ်ရည်များ သဲစုမွန် စောက်ခေါင်းထဲ ဗြစ်ခနဲ ဗြစ်ခနဲ ထွက်စေသည့်တိုင် လုပ်ပြီး လိင်တံပြန်ထုတ်ကာ အမောဖြေလိုက် လေသည် ။ သဲစုမွန် လည်း မည်သည့် စကားမျှ ပြန်မပြောဘဲ ကုန်းထကာ သူမ အဝတ်အစားများ ပြန်ကောက်ယူလိုက်လေသည် ။ ကိုဦး လည်း အမောဖြေရင်း သဲစုမွန် ကို ထိုင်ကြည့်နေလေသည် ။ သဲစုမွန် ဘော်လီ အရင် ပြန်ဝတ်သည် ။
ပြီးနောက် ပွင့်ရိုက်ဂါဝန်ခရမ်းကို ခေါင်းကနေ စွပ်ချသည် ။ ကြမ်းပြင်တွင် ပုံနေသည့် သူမ အတွင်းခံအနီလေး ကိုမှု ကောက်ယူကာ နမ်းလိုက်ပြီး . . . ” သေးဆော် နည်းနည်း နံနေပြီ ” ဟုသာ ပြောပြီး လျော်မည့်အဝတ်ခြင်းထဲ ပစ်ထည့်လိုက်သည် ။ ဆံပင်များကို သပ်တင်ပြီး အိမ်နောက်ဖေး ဝင်သွားလေသည် ။ ကိုဦး လည်း စီးကလက် တစ်လိပ်ကို မီးညှိရင်း တစ်ချက် နှစ်ချက်ဖွာကာ သဲစုမွန် နောက်လိုက်သွား လေသည် ။ သဲစုမွန် ရေချိုးခန်း နှင့် အိမ်သာ ဆက်ထားသော အခန်းထဲ ဝင်သွားသည် ကို တွေ့လိုက်သည် ။ တခါးစေ့ရုံ စေ့ပြီး ဂျတ်မချခဲ့ . ကိုဦး လည်း စေ့ထားသော တံခါးကို အသာစွဲဖွင့် ကြည့်လိုက်သည် ။
ဗိုလ်ထိုင်အိမ်သာ ပေါ် ကျကျနန ပေါင်ကားထိုင်ရင်း ဂါဝန်ကို လှန်ကာ သူမ စောက်စေ့လေး ကို သူမ လက်ဖြင့် ပွတ်ချေကာ စိတ်ဖြေနေသော သဲစုမွန် ကို တွေ့လိုက်ရလေသည် ။ ကိုဦး စိတ်ထဲ ဖျင်းခနဲ ဖြစ်သွားသည် ။ အခန်းထဲ ကိုဦး ဝင်လိုက်သဖြင့် သဲစုမွန် သူခိုး လူမိသလို ဂါဝန်ပြန်ဖုံးကာ မတ်တပ်ထရလိုက်သည် ။သဲစု မင်း ဒါဘာ အချိုးလည်းကျွန်မ ဘာလုပ်နေလို့ လည်း မင်းက ငါလိုးနေတုန်း က စိတ်မပါဘဲ . ခုမှ ကိုယ်လက်နဲ့ ကိုယ် စောက်ပတ်နှိုက်နေတာကို ပြောတာ သဲစုမွန် မျက်နှာ ရဲခနဲ ဖြစ်သွားပြီးအို . ရှင်လိုးတာ ခံပေးပြီးပြီဘဲ . ရှင်ပြီးပေမယ့် . ကျွန်မ မှ မပြီးတာ . တောက် . ပြောရင် ဒါဘဲ . မင်းကို ဘယ်လောက် လိုးလိုး ပြီးတယ် မရှိဘူး . မင်း လက်နဲ့ မင်းလိုးတော့မှ မင်းစောက်ပတ် က ပြီးတာလား။
အဲ့တာတော့ ကျွန်မ မသိဘူး . သေချာတာ ရှင် အသုံးမကျလို့. ကျွန်မ မပြီးတာ . ” ” ဟေ့ဟေ့ . ငါ့ဘက် ပြန်လှည့်မလာနဲ့ . မင်း စိတ်မပါတာကို ထည့်ပြော . မင်းကို လိုးရတာ အသေကောင် လုပ်ရသလိုဘဲ . ဖာခေါ် ချတောင် မင်းထက် အသက်ပါသေးတယ် . ” ” ရှင် အဲ့ဒါဆိုလည်း သွားချပါလား .ကိုယ် အသုံးမကျတိုင်း လာ မမဲနဲ့ ရှင့် . ” ” ဟာ . ငါက အသုံးကျတယ် . မင်းသာ စောက်ဖြစ်မရှိတာ . ငါ့လီးကို တန်းတန်းစွဲ နေတဲ့ ဆော်တွေ တစ်ပုံချည်း . ” ” အဲ့တာ ကျွန်မ ဘာလုပ်ပေးရ မှာလည်း . ကျွန်မ အတွက်တော့ ရှင့်လီးက ရင်ခုန်စရာ မကောင်းဘူးရှင့် . စိတ်ပျက် စရာ . ” ” အဲ့တော့ မင်းက ဘာလုပ်ချင်လည်းကွာ . ငါလည်း မင်းကို စိတ်ကုန်နေပြီ။
လီးဘဲ . လမ်းခွဲမလား ပြော . ” ” ကောင်းပြီလေ . ရှင် စိတ်ကုန်မှတော့ လမ်းခွဲကျတာပေါ့ . ” ” အေး . ကောင်းတယ် . ငါလည်း မင်းလို အဖြစ်မရှိတဲ့ မိန်းမနား အချိန်ကုန် မခံဘူး . သွားပြီ ” ကိုဦး ဒေါသတကြီး ပြောဆိုပြီး ထွက်သွား လေသည် ။ သဲစုမွန် လည်း စိတ်ပျက်စွာ ဖြင့် အနီးရှိ ရေပန်းကို ဖွင့်ကာ ရေချိုးပစ်လိုက်တော့သည် ။ ” အော် . တူမ လာ . ” သဲစုမွန် ဦးလေး ဖြစ်သူ ဆရာကြီး ထံ သွားခြင်း ဖြစ်သည် ။ ” ဟိုလေ .ဦးလေး . သမီး ခုရက်ပိုင်း ခွင့်လေး လိုချင်လို့. . ” ” ဘာလို့ လည်း တူမ ရဲ့ ” ” သမီး အိမ်ထောင်ရေး ကလည်း အဆင်မပြေဘူး . စိတ်တွေလည်း ညစ်နေလို့. ခဏ အနားယူချင်လို့ ပါ . ” ဆရာကြီးလည်း သက်ပြင်းချကာ။
သမီး နားချင်တယ် ဆိုတော့လည်း ခွင့်ပေးရမှာပေါ့ . သုံးဖို့ ငွေရော ရှိလား . မရှိရင် လစာကြိုထုတ်သွားလေ ” ” နေပါစေ ဦး . ရှိပါသေးတယ် . သမီး ခွင့်ပြုပါအုန်း . ” ”အေးပါကွယ် . ” သဲစုမွန် လိမ္မော်ရောင်ပါတိတ် ဝမ်းဆက်လေးဖြင့် ဘော်ဒါဆောင် မှ ဦးလေး ထံ ခွင့်ယူပြီး ထွက်လာခဲ့သည် ။ သဲစုမွန် ယခု အိမ်မှာ တယောက်ထဲ မနေချင် . စိတ်ပြေလက်ပျောက် အနေဖြင့် ငယ်သူငယ်ချင်း မွန်မွန် ထံ အလည်သွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ။ ထို့ ကြောင့် အိမ်ပြန် အဝတ်အစားယူပြီး မွန်မွန်တို့တိုက်ခန်းဘက်ထွက် လာခဲ့သည် ။ မွန်မွန် မှာ သဲစုမွန် ၏ ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်း ဖြစ်သည် ။မွန်မွန် က နယ်မှ ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်တွင် တိုက်ခန်းငှား ပြီး အလုပ်လာ လုပ်သူ ဖြစ်သည် ။ သဲစုမွန် သူမ အိမ်တွင် လာနေရန် ခေါ်သော်လည်း မွန်မွန် မှာ ကိုဦး မျက်စိရှုပ်မည် ဆိုးသဖြင့် တိုက်ခန်း တွင်သာ နေခဲ့လေသည် ။ ”မွန်မွန် ရေ . မွန်မွန် . ” သဲစုမွန် အော်ခေါ်လိုက် မှု မွန်မွန် တို့ အခန်းမှ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ထွက်လာ လေသည် ။ ” မမွန်ရေ . ဧည့်သည် . ” အိမ်နေရင်း ဂါဝန်အဝါရောင်ပွပွ ဖြင့် မွန်မွန်ပြေးထွက် လာသည် ။ မွန်မွန် က အသားဖြူဖြူ ပြည့်ပြည့်ဖောင်းဖောင်း ဆံပင်ကောက်ကောက် ဖြစ်သည် ။ အချောကြီး မဟုတ်ပေမယ့် ကြည့်ကောင်းပါသည် ။ ” ဟယ် . ဘယ်သူများလည်း လို့ကောင်မ လာ . လာ ” မွန်မွန် နှင့် ကောင်မလေး မှာ သဲစုမွန် အဝတ်အစားထုပ် များယူကာ အခန်းထဲ ဆွဲခေါ် လာခဲ့ကျသည် ။
အလုပ်သွားရန် ပြင်ဆင်နေပုံရသည် ။ မိန်းကလေးများ ဖြစ်သော်လည်း ဖြစ်သလိုနေတတ်သူများ ပီပီ တစ်ခန်းလုံး ရှုပ်ပွနေလေသည် ။ ထမိန်ကွင်းလုံးများ . ဘော်လီများ . အတွင်းခံများလည်း နေရာ အနှံ့မြင်မကောင်းလှ ။ ” ဟဲဟဲ ငါတို့ က အလုပ်မအားဘူး ဟ . အလုပ်ပိတ်မှ တစ်ပါတ်စာ စုလျှော်တာ ” မွန်မွန် ကြိုပိတ်ထားသဖြင့် သဲစုမွန် မပြောတော့ . . . သဲစုမွန် လည်း သူမ အကြောင်းစုံ မွန်မွန်တို့ အား ပြောပြလိုက် လေသည် ။ ” အော် . ဒီလိုလား . အေးပါ . နင် စိတ်ကြိုက် ဒီမှာ နေပေါ့ . ငါတို့ က ညမှ အားတာ . ခုတောင် အလုပ်နောက်ကျနေပြီ . ” ” ဒါဆိုလည်း သွားလေ . ငါ ဒီမှာဘဲ စောင့်နေမယ် ” ” အေးအေး . ပြန်လာရင် ဝိုင်ချို တွေ ဝယ်ခဲ့မယ် . ပျော်ပျော်ပါးပါး ပေါ့ဟာ . ” မွန်မွန် ပြောရင်း အကျီ င်္လဲကာ ဂါဝန် နှင့် အတွင်းခံများကို ကြုံသလို လွှင့်ပစ်လိုက်ပြီး အဝတ်အစား အသစ်လဲလိုက်သည် ။
ကဲ . သဲစု နင်နေတတ်သလိုသာနေ . ငါတို့သွားလိုက်အုန်းမယ် . လာ ညီ ” ကျန် မိန်းကလေး မှာ မွန်မွန် ၏ ညီမ စံပယ်ဖြစ်သည် ။ ညီအမ အရင်းဖြစ်ပြီး မွန်မွန် ထက် ငါနှစ်လောက် ငယ်သည် ။ ဖြူဖြူချောချောပင် ဖြစ်သည် ။ သူမလည်း သဲစုမွန် ကို နူတ်ဆက်ကာ မွန်မွန်နောက် လိုက်သွားလေသည် ။ သဲစုမွန် လည်း အမောပြေ ထိုင်ချလိုက်ပြီး . ” တော်တော် ညစ်ပတ်တဲ့ ဟာမတွေ . အပျိုလေးတွေ ဖြစ်ပြီး . အဝတ်တွေလည်း ပုံထားလိုက်တာ ချဉ်ဆော် နံနေတာဘဲ . ဘယ်နှစ်ရက်တောင် ထားလည်း မသိဘူး ” သဲစုမွန် တစ်ယောက်ထဲ ရေ ရွှတ်ပြီး လှဲအိပ်လိုက်သည် ။ မောမောနှင့်မို့အိပ်ပျော်သွားသည် ။ နေ့ လည် လောက်မှ အိပ်နေရာ မှ ပြန်နိူးလာသည် ။
တယောက် ထဲမို့ပျင်းလည်း ပျင်းနေသည် ။ သဲစုမွန် ပျင်းလာ သဖြင့် တီဗီကြည့်ရန် တီဗီရှိရာ သွားကာ ခလုပ်ဖွင့်လိုက်လေသည် ။ စက်ထဲ တွင် ရှိနေသော အခွေမှာ အော်တို လည်ပတ်ပြီး ထ လာတော့သည် ။ တီဗီဖန်သားပြင် မှ မြင်ကွင်းကြောင့် သဲစုမွန် ကျက်သီးများ ဖြန်းခနဲ ထသွားသည် ။ မဖွယ်မရာကား ဖြစ်နေသည် ။ သာမန် မဖွယ်မရာကား မဟုတ်ဘဲ . ဖူးကား ဖြစ်နေသည် ။ မိန်းကလေးများကို အဝတ်အစားချွတ် . ကြိုးဖြင့်တုတ်ကာ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ကလိနေသော ကားဖြစ်သည် ။ သဲစုမွန် ထို ဇာတ်ဝင်ခန်း ကိုကြည့်ရင်း ရင်တွေ ခုန်လာလေသည် ။ ငါများ ဖြစ်လိုက်ရင် ဆိုသော အသိကြောင့် စိတ်တွေ လှုပ်ရှားလာ လေသည် ။
သူမ မသိစိတ်ကြောင့်လား မသိ သူမ လက်များသည် သူမ ရင်သား ထံ တစ်ဖက် . ထမိန်အောက်မှ စောက်ဖုတ် ကို တစ်ဖက် စမ်းမိသွားသည် ။ ရာဂစိတ် ထခြင်း မရှိသည့် သဲစုမွန် တယောက် ဇာတ်ကား အား မလွတ်တမ်းကြည့်ရင်း အသိစိတ်မဲ့မဲ့လာကာ ထမိန်အောက် လက်သွင်းကာ သူမ စောက်စေ့လေး ချေကာ အာသာဖြေရင်း တစ်ကိုယ်လုံး တဆက်ဆက်တုန်ကာ ပြီးသွားလေသည် ။ တီဗီ ကိုလည်း ကဗျာကယာ အမြန်ပိတ်ပစ်လိုက်ရသည် ။ ယခု မှ သူမ ကိုယ်သူမ ပြန်ကြည့်မိသည် အကျီ င်္ကြယ်သီများ ပြုတ်ကာ ဘော်လီလည်း ရွှဲ့နေသည် ။ ထမိန်တွင်လည်း အရည်များ အကွက်လိုက် ထနေလေသည် ။
သဲစုမွန် လည်း သူမကိုယ် သူမ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြန်လုပ်ပြီး သူမ ကိုယ် သူမ အရမ်း အံ့သြ သွားလေသည် ။ ဇတ်ဝင်ခန်းများ ကိုလည်း ပြန်မြင်ယောင်လာ လေသည် ။ အရမ်းလည်း မောဟိုက်နေသည် ။ ခဏ အပန်းဖြေပြီး တစ်ခန်းလုံး ရှုပ်ပွနေသည့် မွန်မွန်တို့ညီအမ ၏ ထဘီများ အဝတ်အစားများ ကို လိုက်ကောက်ကာ ရှင်းပေးလိုက်သည် ။ မွန်မွန် ချွတ်ပစ်လိုက်သော မွန်မွန် ၏ အတွင်းခံဖြူလေးအား အကောက်တွင် မိန်းကလေးခြင်း အနိုင်ကျင့်နေသည့် ဇာတ်ဝင်ခန်း တချို့ကို ပြန်သတိရသွားသည် ။ ဂျပန်ကျောင်းသူများသည် အတွင်းခံများ ချွတ်ကာ ကျောင်းသူလေး တစ်ဦး ၏ ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်နေသော အခန်းဖြစ်သည် ။
သဲစုမွန် လည်း ရင်တွေခုန်လာကာ စမ်းသပ်ကြည့်ချင်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည် ။ သိလိုသော အရာကို စမ်းသပ်ချင်တတ်သည့် အကျင့်သည် သဲစုမွန် ၏ ဗီဇဖြစ်သည် ။ ယခု သူမ ရှေ့တွင် ချွတ်သွားသော သူငယ်ချင်းမွန်မွန် ၏ အတွင်းခံဖြူလေး ကို ကောက်ယူကြည့်လိုက်သည် ။ အတွင်းခံလေး အလယ်တွင် အရည်စိုထားသော အကွက်ခြောက်လေးများလည်း တွေ့လိုက်ရသည် ။ သဲစုမွန် ဘယ်သူ မှ မရှိတုန်း မွန်မွန် ၏ စောက်ပတ်ထိ ထားသည့် နေရာလေးကို ကောက်နမ်းကြည့်လိုက်သည် ။ သေးနံလေး ရလိုက်သည် ။ သဲစုမွန် ရင်တွေလည်း တဒိုင်းဒိုင်း ခုန်လာ လေသည် ။ စိတ်တွေလည်း လွတ်လာ လေသည် ။
ထို့ ကြောင့် တစ်ခန်းလုံးမှ မလျော်ရသေးသော အတွင်းခံဘောင်းဘီ နှင့် ထဘီ . စကတ် နှင့် ဘောင်းဘီ များကို သီးသန့် လိုက်ကောက်လိုက်သည် ။ ပြီးနောက် အကျီင်္များကို သီးသန့် ကောက်ခါ ရေချိုးခန်း ထဲ အကျီ င်္သီးသန့် လျော်ဖွတ်ပေးလိုက်သည် ။ ပြီးနောက် စကတ်များ နှင့် ဘောင်းဘီတိုရှည် များကို တစ်ထည်ခြင်း နမ်းကာ လျော်ပေးလိုက်သည် ။ သဲစုမွန် အသိစိတ်တွေ ခဏလွှတ်ထားလိုက်သည် ။ ယခု ထဘီများ နှင့် မွန်မွန် တို့ညီအမ ၏ တစ်ပတ်စာ အတွင်းခံ ခြောက်ထည် သာ ကျန်တော့သည် ။ ဆိုဒ်မတူ သဖြင့် ဘယ်သူ့ ဟာမှန်း သဲစုမွန် ခန့် မှန်းနိူင်သည် ။ မွန်မွန် ဆိုဒ်ကကြီးသည် ။ သဲစုမွန် ထမိန်များကို တထည်ခြင်း သူမခေါင်းကို ဆွတ်ကာ နမ်းရှုံ ရူးသွပ်ပစ်လိုက်ပြီး သူမ အား ထမိန်ဖြင့် ဝိုင်းအုပ်ထား သလို တွေးထား လေသည် ။
ပြီးနောက် အတွင်းခံလေးများ ကို တစ်ထည်ခြင်း နမ်းကာ မွန်မွန် နှင့် စံပယ် ၏ အဖုတ်အား နမ်းနေရသလို စိတ်ကူးလေသည် ။ အတွင်းခံလေးများမှာ သေးနံ့ ရော . စောက်ပိနံ့ ရော မွှန်ထူနေသည် ။ သဲစုမွန် ရွှံရမည် ထက် တန်ဖိုးကြီး ရေမွှေးနံ့ရှု သလို နူစ်သက်လာ လေသည် ။ ပြီးနောက် အဝတ်အစား အားလုံး လျော်ပေးလိုက် လေသည် ။ သဲစုမွန် ကျေနပ်မိသည် ။ မွန်မွန် တို့ ပြန်လာသော အခါ အဝတ်အစားများ အားလုံး လျော်ကာ လှန်းထားသည် ကို တွေ့သဖြင့် သဲစုမွန် အား အားနာကုန်ကျသည် ။ သို့ သော် သဲစုမွန် မှာ အကြံရှိနေသူမို့သူမလျော်ပေးပါရစေ ခွင့်တောင့်ပြီး နေခဲ့သည် ။ ပြောမရသည့် သဲစုမွန် ကိုလည်း လက်လျော့လိုက်ရသည် ။ ညဘက် မွန်မွန် တို့ နှင့် ရှေးဟောင်း နှောင်းဖြစ် ပြောကျရင်း . နေ့ ဘက် မွန်မွန် တို့အတွင်းခံများ ခိုးနမ်းခဲ့သည့် သဲစုမွန် ယခု စကားပြောရင်း မသိမသာ မွန်မွန် နှင့် စံပယ် ၏ ဖင်များကို ခိုးကြည့်ကာ စိတ်ကျေနပ်နေခဲ့လေသည် ။
တဖြေးဖြေး နှင့် အချိန်ကုန်လာ သော်လည်း သူမ တို့ စကား လက်စ မသတ်နိူင်သေး ။ စံပယ် ပင် အိပ်မောကျနေပြီ ဖြစ်သော်လည်း မွန်မွန် နှင့် သဲစုမွန် တို့ မှာ မတွေ့ရသည်မှာ ကြာပြီ ဖြစ်သည့် အတွက် အလွမ်းသယ်နေကျလေသည် ။ သဲစုမွန် လည်း သူမ ခံစားချက်များကို မွန်မွန် အား ရင်ဖွင့်လေ့ ရှိသူ ဖြစ်သည် ။ ” နင်ပျော် သလောက်နေပါဟာ . ဟဲဟဲ နင်ပြန်သွားရင် . ငါတို့ ကို အဝတ်လျော်ပေးမည့် လူတောင် ရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ,အားနာလိုက်တာ ” ” အော် . နင်ကလည်း ချင်းချင်းတွေဘဲ ” ” အားနာတာပေါ့ ဟ . နင်က ငါ့ အောက်ခံ တွေပါ လျော်ထားတာ . စံပယ် ဆို နင့်ကို အရမ်း အားနာ နေတာ . နောက် မလျော်ပါနဲ့ဟာ” သဲစုမွန် လည်း စကားပြောရင်း အရှိန်လည်း ပြန်တက်လာသည် ။ ” ရပါတယ် ဟာ . ငါလေ နင့် ကို ပြောပြစရာ ရှိတယ် . ငါ ပြောလည်း မပြောရဲဘူး ” ” ဟဲ့ . ပြောစမ်း နင်နဲ့ငါ ကြားမှာ ဘယ်တုန်း က လျှို့ဝှက်ချက် ရှိဖူးလို့ လည်း . ဟဲဟဲ ငါလည်း နင့်ကို ပြောစရာ ရှိတယ် ဟ ” သဲစုမွန် လည်း မွန်မွန် အကြောင်းကို အရင်သိချင် သွားသည် ။
ကောင်းပြီလေ .မွန်မွန် နင် အရင်ပြော . နင်ပြီးရင် ငါပြောမယ် . ” မွန်မွန် ဝိုင်ခွက်ကို တစ်ချက်မော့သောက်လိုက်ပြီး နူတ်ခမ်းသုပ်လိုက်လေသည် ။ သူမ တို့ နှစ်ဦး လည်း ဝိုင်အရှိန် ဖြင့် အတော်ကောင်းနေပြီ ဖြစ်သည် ။ လေသံပင် မပီမသလေး ဖြစ်လာသည် ။ ” မိသဲ နင်ငါ့ကို အထင်တော့ မသေးပါနဲ့ဟာ . ငါ့ ခံစားချက် အရပါ ‘ ‘ ” အမလေး ဟယ် . ကျီးကျယ်နေလိုက်တာ . ဘာကိစ္စ မို့ လို့ လည်း . ” မွန်မွန် သက်ပြင်း တစ်ချက် ချလိုက်ပြီး ” အရင်က ငါ့ အမေ ဆေးရုံ တင်ထားရတယ် . ခွဲစိတ်ရမယ်တဲ့ . ငါတို့ မှာ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေလည်း ကုန်ပြီ . အဲ့ဒါ . . . ” ” မွန်မွန် . ဘာ အဲ့ဒါလည်း အမှန်တိုင်း ပြောစမ်း ” ” ငါ နဲ့ ငါ့ညီမလေး က နင်ထင်သလို မိန်းမကောင်း တွေ မဟုတ်တော့ဘူး ဟ . ပိုက်ဆံရဖို့အတွက် ဘာမဆို လုပ်နေရတယ် . နင် ငါပြောတာ သဘောပေါက်တယ် မလား . နောက်တော့ ငါ့အမေ လည်း ဆုံးသွားတယ် .ဒါပေမယ့် ငါတို့ယူထားတဲ့ အကြွေးတွေက များတယ်။
ငါတို့ညီအမ အဲ့အကြွေးတွေကို ခန္တာကိုယ် နဲ့ ရင်းဆပ်ပြီး ဒီ ဘဝ ရောက်ခဲ့ရတာ . ဒါပေမယ့် ငါတို့အပေါစားတွေ မဟုတ်ဘူး မိသဲ . ငါ့ကို အထင်အရမ်းသေးသွားပြီလား မိသဲ ‘ ” မွန်မွန် . နင်တို့အကြောင်းကြား ရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး . ဒါပေမယ့် ငါ နင့်ကို အထင်မသေးပါဘူး . နင်တို့ က ဘဝ အတွက် ခန္တာကိုယ် ပေးဆပ်ထားရတာ . ငါမှာတော့ လင်ကောင်း ရပေမယ့် ငါ့အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ အရာတွေကို မရနိူင်ခဲ့ဘူး ” ” ကဲ . မိသဲ နင် ပြောမယ် ဆိုတာကရော ” ” ငါလေ . နင့် ဟာကို နမ်းကြည့်ချင်တယ် ” သဲစုမွန် မျက်လုံးများသည် မွန်မွန် ပေါင်ကြားသို့ညွှန်ပြလိုက် လေသည် ။
မွန်မွန် သဘောပေါက်သွားသည် ။ ပြီးနောက် အသံထွက်အောင် တစ်ချက် ရီလိုက်ပြီး ။ ” ခစ်ခစ် . မိသဲ ရယ် . နင်က ယောင်္ကျားစစ်စစ် နဲ့ ကျတော့ စိတ်မထဘဲ . မိန်းမခြင်း ကျမှ စိတ်ထရတယ် လို့ ” ” ဟေ့အေး နင်ထင်သလို မဟုတ်ဘူး မိမွန် . ငါ ဖြစ်ချင်တာ မဟုတ်ဘူး . သိမ်ငယ်ချင်တာ . နင်တို့အောက်စက် ထဲက အခွေကြည့်ပြီး ထဲက ဒီ ခံစားချက် ရလာတာ . ငါ့ကို စိတ်လှုပ်ရှားစေတယ် . ” ” အဲ့တာ ဖူးကား သို့ခေါ်တယ် . ခံစားချက်နဲ့ ကစားတာ ဟ . နင်ပြောသလို သိမ်ငယ်စိတ် ဖြစ်နေရင် နင် ကာမ ဘက် အားသန်သွားပြီ . တဏှာရာဂ ကို နိူးဆွတဲ့ အလေ့အထ လို့ တော့ အနောက်တိုင်းလူတွေ က ဆိုထားတယ် . ငါလည်း ဒီလောက ထဲ ရောက်မှ သိခဲ့ရတာ . ဘာလည်း အဲ့တာက နင့်ကို စိတ်ထစေလို့ လား ” ” ငါ ဝန်ခံပါတယ် မွန်မွန်ရယ် . ” ” အင်းပါ . မိသဲ နင်တကယ် စိတ်ပါတာ သေချာလား . နင် စဉ်းစားအုန်းနော်။
မွန်မွန် . နင်ငါ့အကြောင်း အသိဆုံး ငါက ခံစားချက် ကိုဘဲ ဦးစားပေးတယ် . ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် မပြင်တတ်ဘူး ဆိုတာ . ငါနေ့ လည် က နင်တို့ညီအမ အတွင်းခံတွေ ခိုးနမ်းမိတယ် . ခံစားရတာ တမျိုးဘဲ . အရမ်း သိမ်ငယ် ရသလိုဘဲ ” သဲစုမွန် စကားပြောနေသော်လည်း မျက်လုံးများသည် မွန်မွန် ပေါင်ကြား ကိုသာ ကြည့်နေလေသည် ။ မွန်မွန် သဲစုမွန် မျက်လုံးတွေ ကို သတိထားမိနေသည် ။ ” နင် တကယ် နမ်းကြည့်ချင်တာလား ” သဲစုမွန် လည်း ခေါင်းငြိမ့်ကာ ” အင်း ” ” အေးပါ . ငါနင့်ကို တတ်နိူင်သလောက် ကူညီပေးမယ် ” မွန်မွန် သူမ ဖင်ကိုကြွကာ ထမိန်အောက်မှ အတွင်းခံချွတ်ပြီး သဲစုမွန် အား ပေးလိုက်လေသည် ။ သဲစုမွန် လည်း မွန်မွန် ပေးသော အတွင်းခံလေးကို တုန်ရီနေသော လက်များဖြင့် ယူလိုက်ပြီး မွန်မွန် အတွင်းခံ ကို မွန်မွန် ရှေ့ နမ်းပြရတော့မည့် အသိ ကြောင့် သိမ်ငယ်သလိုလို ရှက်သလိုလို ဖြစ်သွားသည် ။
မဝံ့မရဲ နှင့် မွန်မွန် အား ပြန်ကြည့်မိသည် ။ မွန်မွန် လည်း သဲစုမွန် အမူအရာ ကို မျက်လုံး အဝိုင်းသားဖြင့် ကြည့်နေသည် ။ သဲစုမွန် လည်း မွန်မွန် အတွင်းခံလေး ကို ဆုတ်ကိုင်ကာ မျက်လုံးမှိတ်ပြီး နမ်းရှုံလိုက်လေသည် ။ ဝိုင်တွေ ဆက်တိုက်သောက်နေသဖြင့် မွန်မွန် သေးခဏ ခဏ ပေါက်ထားသည် ။ အပျင်းကြီးပြီး ရေမဆေးတတ်သည့် မွန်မွန် အကျင့်ကြောင့် အတွင်းခံလေး မှာ မွန်မွန် သေးနံ့လေးများ စွဲနေလေသည် ။ ” ဘယ်လိုလည်း သဲစုမွန် . ဘယ်လို ခံစားရလည်း ” ” ရင်တွေခုန်တယ်ဟာ . ငါ အတွင်းခံလေးတောင် ဒီလောက် ဖြစ်နေရင် နင့် စောက်ပတ် ကိုသာဆို . . . ” သဲစုမွန် ဘာကို ဆိုလိုသည် ကို မွန်မွန် သဘောပေါက်သည် ။ မွန်မွန် နောက်ကို နည်းနည်းဆုတ်လိုက်ပြီး သူမ ဒူးနှစ်ဖက် ကို ကွေးခါ ပေါင်နည်းနည်းကားလိုက်သည် ။
သဲစုမွန် လည်း ရင်ခုန်စွာ စောင့်နေလေသည် ။ ထမိန်လှန်ပြလိုက် သဖြင့် မွန်မွန် ပေါင်ကြား မှ စောက်ဖုတ်ကြီး သည် လူနှင့် လိုက်အောင် ပြည့်ပြည့်ဖောင်းဖောင်း ဖြစ်နေလေသည် ။ သဲစုမွန် ဘေးတွင် စံပယ် အိပ်နေသည် ကို ကြည့်ပြီး ” ဟဲ့ နင့်ညီမ နဲ့ ဖြစ်ပါ့မလား ” ” ဖြစ်ပါတယ်ဟာ . လုပ်မည့်သာ လုပ် . နင် သူ့ဟာ နမ်းချင်လည်း ရတယ် . ငါတို့ က ညတိုင်း တယောက်ဟာ တယောက် ကလိနေကျ . နင်ရှိနေလို့ငြိမ်နေကျတာ ” ” အော် .နင်တို့ လည်း ငါလိုလား . . ” ” ဟာ မဟုတ်ဘူး . အာသာဖြေတာ . ကဲ ကောင်မ . လုပ်မယ် ဆို လုပ်တော့ ” မွန်မွန် ကတော့ အစွမ်းကုန် ပေါင်ကားပေးထား လေသည် ။ သဲစုမွန် လက်တွေ့ အဖုတ်စစ်စစ်ကြီး နမ်းဖို့ကျ ရင်တွေ ခုန်ရပြန်သည် ။ မျက်စိရှေ့ က မွန်မွန် စောက်ဖုတ်ကြီး ကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နေရပြီ. မိန်းမခြင်းမို့ရွှံသလိုလို လည်း ဖြစ်နေသည် ။
သဲစုမွန် သက်ပြင်းချပြီး ” ကောင်မ ငါ ယက်ပြီနော် ” ” အေး . နင် ဒီတိုင်း ဘဲ ထမိန်အောက် ခေါင်းဝင်ယက် နင့်အတွက် ပိုကောင်းတယ် ” သဲစုမွန် လည်း မွန်မွန် ပေါင်ကြား ခေါင်းဝင်ကာ နူတ်ခမ်းထူထူ စောက်ဖုတ်ကြီး ကို ရွှတ်ခနဲ ကုန်းနမ်းလိုက်သည် ။ မွန်မွန် ရော သဲစုမွန် ပါ ရင်ခုန်သံ ကိုယ်စီဖြင့် သဲစုမွန် လည်း စိတ်လွှတ်လိုက်ပြီး သူမ လျှာ လေးဖြင့် တစ်ပြက်ပြက်မည်အောင် ယက်ပေးလိုက်သည် ။ မွန်မွန် တဟင်းဟင်း နှင့် ငှက်ဖျားတက်သလို ဖြစ်နေလေသည် ။ ” ဟဲ့ နင်ဘာကြည့်နေတာလည်း ” မွန်မွန် အသံကြောင့် မွန်မွန် ပေါင်ကြား မျက်နှာဟပ်ကာ စောက်ပတ် ယက်နေသော သဲစုမွန် ကျောချမ်းသွား သည် ။ သဲစုမွန် ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်သော အခါ အိပ်နေသော စံပယ် သည် မွန်မွန် နှင့် သဲစုမွန် အား ငုတ်တုတ်လေး ဖြင့် ထိုင်ကြည့်နေ လေသည် ။
မွန်မွန် စံပယ့် အား လေသံမာမာ နှင့် ” ဟဲ့ ဘာကြည့်နေတာလည်း . သဲစုမွန် စောက်ပတ် ယက်ကြည့်ချင်တယ် ဆိုလို့ ’ ယခုလို အပြောခံလိုက်ရတော့ သဲစုမွန် မျက်နှာ ရဲကာ ရှက်သွားသည် ။ စံပယ် သည်လည်း အိမ်ချင်မူးတူး ဖြင့် ကြည့်နေလေသည် ။ ” ကဲ မိသဲ .ဆက်လုပ် ” သဲစုမွန် လည်း စံပယ် သိမှတော့ မထူးတော့ပြီမို့ မွန်မွန် ၏ ထမိန်အောက် သို့ဖင်မူးထောင်း ထောင်ကာ ခေါင်းဝင်ပြီး ယက်ပေးလိုက်သည် ။ ” ကျွတ် ကျွတ် . သဲစုမွန် ရယ် ကောင်းလိုက်တာ ” ငါးမိနစ်ခန့် ကြာသော် . ” စံပယ် ဟာ ပြောင်းယက်ချင်ပါအုန်း . သဲစုမွန် . . ” သဲစုမွန် လည်း ရင်တွေ ခုန်လာပြန်သည် ။ စံပယ့် ကိုကြည့်တော့လည်း ပြန်အိပ်ဖို့ပြင်နေလား မသိ တုံးလုံး လှဲနေပြီ ဖြစ်သည် ။
အွန်း . ယက်ချင် ယက်ပေါ့ . စံပယ် ကတော့ အိပ်ချင်နေပြီ . ထမိန်သာ လှန်ယက်တော့ . ” မွန်မွန် လည်း စံပယ့် ထမိန်ကို လှန် အတွင်းခံဆွဲချွတ်ပြီး ” သဲစုမွန် လာလေ ” သဲစုမွန် သိမ်ငယ်စိတ်များ ဖြစ်လာရသည် ။ သို့ ပေမယ့် ထို ခံစားချက် ကို သူမ သဘောကျသည် ။ ထို့ ကြောင့် လေးဘက်လေး ထောက်ကာ စံပယ့် ခြေရင်း သို့သွားလိုက်လေသည် ။ စံပယ် မှာ အသားဖြူသူမို့ပေါင်တံလေးများ ဖြောင့်စင်းနေလေသည် ။ အမွှေးရိပ်ထားသော စံပယ့် စောက်ပတ်ကိုလည်း သဲစုမွန် ငုံ့ နမ်းကာ လျာလေးဖြင့် တို့ ကာ ယက်ပေးလိုက်သည် ။ ” ဖြန်းးး ” ဟုသော လှုပ်ရှားသံ နှင့် သဲစုမွန် တင်ပါး ပူခနဲ ဖြစ်သွားသည် ။ ” အွန့်” သဲစုမွန် လည်း အာမေဠိတ်သံလေး ထွက်သွားသည် ။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော စံပယ့် စောက်ပတ် ကုန်းယက်နေသဖြင့် သဲစုမွန် သည် ဖင်မှုးထောင်း အနေအထား ဖြစ်နေသည် ။
ထို့ ကြောင့် သဲစုမွန် ကုန်းထားသော တင်ပါး အား မွန်မွန် လက်ဝါးဖြင့် လွှဲရိုက်လိုက် ခြင်း ဖြစ်သည် ။ အရမ်းမနာသော် လည်း ခပ်စပ်စပ်တော့ နာသည် ။ မွန်မွန် သူမ အား ခေါင်းလှည့်ကြည့်သော သဲစုမွန် အား ” ကောင်မ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ပါဟယ် . နင့်အိုး ကောင်းသေးလား စမ်းကြည့်တာ . ” မွန်မွန် ပြောင်ရိုက် ရိုက်ခဲ့ပေမယ့် အသားနာသွားသည့် အရသာ ကို သဲစုမွန် နှစ်သက်သွားသည် ။ ” မိမွန် . ငါ့တင်ပါးတွေ ကို စောစော ကလို ခပ်စပ်စပ်လေး ထပ်ရိုက်ပေးပါလား . ငါ ကြိုက်တယ် . ” ” အော် အေးအေး . ငါ နင် သေးပါထွက်အောင် ရိုက်ပေးရ မလား ” ” နင် လုပ်ချင် သလို လုပ် ” ” ဖြန်းး ဖြန်းးဖြန်းးဖြန်းးဖြန်းး” ” အွန့်ဟင့် အင့် အွန့် ဟွန့်” မွန်မွန် လည်း သဲစုမွန် တင်ပါးတွေ အား အဆက်မပြတ်ရိုက်ပေးလိုက်သည် ။ မွန်မွန် ၏ ရိုက်ခြင်းကြောင့် သဲစုမွန် စိတ်များပိုမို ကြွကာ စံပယ့် စောက်ပတ်လေးအား ပိုမို ယက်ပေးနေမိသည် ။
မွန်မွန် လည်း ရိုက်ရင်း သဲစုမွန် ထမိန်လေး ကို ဖြည်ချကာ ချွတ်လိုက်လေသည် ။ ပြီးနောက် သဲစုမွန် အတွင်းခံကို အသာလေးလိပ်ချလိုက်သည် ။ ထိုအခါ သဲစုမွန် အတွင်းခံသည် လိပ်ဆင်းသွားကာ ပေါင်သို့ ရောက်သွား လေသည် ။ အပစ်အနာအဆာ မရှိသော သဲစုမွန် တင်သားများသည် လုံးကာ ဖြူဝင်းပြီး ပြောင်ချောနေလေသည် ။ တင်နှစ်ခြမ်းကြားတွင် သဲစုမွန် ၏ ခရေပေါက်လေး နှင့် အောက်ဖက်မှ တစ်လက်မခန့် အပေါက်အမြောင်းလေး ရှိသော နူတ်ခမ်းနှစ်လွှာ ပေါ်နေလေသည် ။ သဲစုမွန် လည်း အရည်များစိမ့်ထွက်နေပြီ ဖြစ်သည် ။ မွန်မွန် သူမအား လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်နေသည်ကို မသိကျေးကျွန်ပြုကာ ပေါ်လာသမျှ ခံစားချက်ကို အပစ်မဲ့သော စံပယ့် စောက်ပတ်လေး အပေါ်သာ ပုံချကာ ဖိဖိယက်ပေး မိသည် ။
စံပယ်လည်း အိပ်ယာခင်းများကို ဆုတ်ကာ အသံထွက်အောင်ပင် ငြီးငြူနေလေသည် ။ ” ဟဲ့ . . သဲစုမွန် လှန့် သွားသည် ။ သူမ စောက်ခေါင်းထဲ ထိုးဝင်လာသော အရာတစ်ခုကြောင့် ဖြစ်သည် ။ ” မွန်မွန် နင်ဘာထည့်လိုက်တာလည်း ‘လီးတု ” မွန်မွန် ယောင်္ကျားအင်္ဂါနှင့် တူသော ရာဘာချောင်း တစ်ခုကို သဲစုမွန် စောက်ခေါင်းထဲ မှ ဆွဲနုပ်ကာ ထောင်ပြလိုက်သည် ။ ဘာလည်း မကြိုက်ဘူးလား . မဟုတ်ပါဘူး . တမျိုးဘဲဟ . ခံစားရတာ . ဆက်လုပ်ပေးဟာ ” ” အေးအေး . ကိုဦးလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့ ဟ်ဟ် ” မွန်မွန် ပြောင်ချော်ချော်ပြောရင်း သဲစုမွန် အဖုတ်အား လီးတု ဖြင့် မွှေကာ ကလိပေးလိုက် လေသည် ။အွန်းးးး အားပါးပါး . ကောင်းတယ်ဟာ . ငါ တခါမှ ဒီလို မခံစားဖူးဘူး .မိန်းကလေးသုံးဦး သည် ရင်ခုန်သံကိုယ်စီ ဖြင့် တိုက်ခန်း အတွင်း အာသာဖြေနေကျလေတော့သည်……ပြီးး ။